China All-in-one လမ်းအမှတ်အသားစက်ရုံနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ | ACE စက်ပစ္စည်း
All- In-one လမ်းအမှတ်အသားစက်
TW-FJ All-in-one Thermoplastic Kneader အမှတ်အသားစက်သည်အပူပေးအရည်ပျော်ရေနွေးအိုးနှင့် kneader marking machine နှင့်ပေါင်းစပ်ထားသော multi-functional ဖြစ်စေလက်ဖြင့်ဖိအားပေးသည့်စက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ခွဲခွာခြင်း၊ ကျောင်း၊ နှင့်စက်ရုံ။ စက်သည်အရွယ်အစားနှင့်အလေးချိန်သေးငယ်ပြီးလုပ်ကိုင်ရန်အတွက်အော်ပရေတာနှစ်ခုသာအသုံးပြုရန်လွယ်ကူပြီးအဆင်ပြေသည်။
စက်သည်အထူးသဖြင့်ကားရပ်နားရန်နေရာများ၊ ကျောင်းများ၊ လူနေအိမ်များနှင့်စက်ရုံများကဲ့သို့သေးငယ်သော်သော်လည်းအရပ်ရပ်သို့ကွဲပြားသောစီမံကိန်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ စက်သည်အရွယ်အစားနှင့်အလေးချိန်သေးငယ်ပြီးလုပ်ကိုင်ရန်အတွက်အော်ပရေတာနှစ်ခုသာအသုံးပြုရန်လွယ်ကူပြီးအဆင်ပြေသည်။
TW-FJ All-in-one Thermoplastic Kneader အမှတ်အသားစက်
ပြင်ပအတိုင်းအတာ (L * W * H) 1200X900X1100mm
ဖန်ခွက်ပုံး၏စွမ်းရည် ၂၅ ကီလိုဂရမ်
ပုတီး dispending နည်းလမ်း ဂီယာမောင်းနှင်, အလိုအလျောက် clutch
အပူအပေါ်ယံပိုင်းပစ္စည်းအပူချိန် 170-220 ℃
LPG ဆလင်ဒါစံ 15KG
အကျယ်အမှတ်အသားပြုသည် 100、150、200、300mm、 400、450mm ၏ zebra လိုင်းများနှင့်ပိုမိုသက်ဆိုင်သည်
မောင်းသူအားမြှင့်တင်ခြင်း၊ ပန်းကန်တိုးမြှင့်ခြင်း၊ ပြားမြှင့်တင် / ကုလားထိုင်မြှင့်တင်ရန်
2. အထူးပြုအလယ်အလတ်ဖိအားပေးသောမီးဖိုသည်စက်မှုအသုံးပြုမှုအတွက်တပ်ဆင်ထားသည်။ ၎င်းသည်မြင့်မားသောအပူထိရောက်မှုနှင့်လျင်မြန်စွာအရည်ပျော်မှုရှိသည်။
၃။ မီးလမ်း၏ထူးခြားသောခလုတ်ခုံအဆို့ရှင်သည်အော်ပရေတာအားတံတွေးထွေးသည့်အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်စေပြီးမီးလမ်းနှင့်မီးလျှံထိန်းချုပ်မှုကိုချိန်ညှိနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်အမှတ်အသားကိုပိုမိုလုံခြုံစေပြီးပိုမိုထိရောက်အောင်ပြုလုပ်ပါ
4. ရွေ့လျားထုတ်ယူနိုင်သောအထုတ်နှစ်မျိုးသည်ကောင်းမွန်သောအလုပ်လုပ်သည့်ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုထိန်းသိမ်းရန်အချိန်မီကုန်ထုတ်ဓာတ်ငွေ့ကိုထုတ်လွှတ်သည်။
1. လိုင်းအထူကိုညှိနိူင်ပါသလား။ အဘယ်သို့နည်း
A: စက်၏သက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံးတွင်နည်းပညာအကြံဥာဏ်များပေးရန်ကျွန်ုပ်တို့တွင်တာဝန်ရှိသည်။ ဓာတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများပို့ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် Whatsapp, Skype နှင့်အီးမေးလ်မှတဆင့်ပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်သည်။
ဟွန်ဒါ Gx35 ကွန်ကရစ်တုန်ခါမှုအပြီးသတ်မျက်နှာပြင် ...
0.080CBM ဟိုက်ဒရောလစ် Mini Mini တူးဖော်သူနှင့်အတူ 1680KG